जान्नुहाेस ! बेलपत्रको सौन्दर्य गुणकाे बारेमा, छाला देखि कपालसम्मकाे लागि हुन्छ ! फाइदाजनक ! – Samacharpati
काठमान्डाैँ, ७ फागुन । शिवरात्रीको अवसरमा शिवालयमा पूजाआजा गरिन्छ । यस क्रममा शिवलिंगमा बेलपत्र चढाइन्छ । बेलपत्र एक किसिमको वनस्पती हो । यसको खास महत्व छ, औषधिय महत्व ।